- असार १५ मा दहि चिउरा किन खाने ?
असार १५ मा दहि चिउरा किन खाने ?
असार १५ मा दही चिउरा, साउन १५ मा खिर, जनै पूर्णिमामा क्वाँटी, माघेसंक्रान्तिमा तरुल, घिउ, चाकु, शिवरात्रिमा गाँजा खाने हामी नेपालीहरुको परम्परा नै हो । प्रत्येक सम्वत्सरको असार १५ मा नेपाली समाजमा खेतको हिलोमा टेक्ने र रोपाईं गरी दही चिउरा खाने परम्परा छ । अन्य पेसा र व्यवसायमा रहेका नेपालीले पनि दही चिउरा खाने गर्दछन् । हाम्रा विभिन्न चाड पर्वको फरक फरक मूल्य र मान्यता भएपनि चाडका दिन खाने परिकारको पनि विशेष महत्व रहेको हुन्छ ।
हाम्रो संस्कृतिमा पनि दहीको स्थान महत्वपूर्ण रहेको छ । शुभकार्यका लागि कुनैपनि महत्वपूर्ण काम गर्नुअघि दही खाने र दहिमा अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाउने परम्परा रहेको छ । नेवारी परम्परामा चिउरालाई पनि शुभ सकुन र सगुनको रुपमा लिइन्छ ।
गुरु गोरखनाथले नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि दही खान दिएका थिए भन्ने किंबदन्ती समेत रहेको छ ।
प्रकाशित मितिः सोमबार, असार १५, २०७७, १०:५५